LinkedIn ကုမ္မဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Follow Button | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2012 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn ဟာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေပြုလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတယ်။ စီးပွားရေးမှစီးပွားရေးသို့ (B2B) ဖောက်သည်များနှင့်ရောင်းချသူများအတွက်၊ LinkedIn ရှိလူမှုရေးအရနောက်လိုက်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားသတင်းကောင်းပေးနိုင်သည်။ သင်အခွင့်အလမ်းရသောအခါ LinkedIn မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများကိုလည်းသင်ဒေါင်းလုပ်ချသင့်သည် - သင်၏စီးပွားရေးကွန်ယက်အတွင်းရှိထိပ်တန်းသတင်းများနှင့်ခေါင်းစဉ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်သူတို့၏ algorithm ကိုကောင်းစွာညှိသည်။
စတင်ပါ သင်၏ကုမ္ပဏီအမည်ကိုသူတို့၏ခလုတ်ဖန်တီးသူတွင်ရိုက်ထည့်ပါ အလိုအလျောက်ပြီးပြည့်စုံသည့် dropdown မှရွေးပါ။ သင်အဲဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့လိုကောင်းလိုအပ်လိမ့်မယ်။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်!
ခလုတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်မြင်တွေ့နိုင်သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာအေဂျင်စီ ဆိုဒ် ငါတို့နောက်သို့လိုက်ရန်သေချာပါစေ!
Tags: linkedinlinkedin ကုမ္ပဏီlinkedin တီထွင်သူနောက်ဆက်တွဲလိပ်စာနောက်ဆက်တွဲစာရင်းအကြံပေးချက်များအတွက် linkedin